Noseyishayile akakayosi: I-IFP nomqansa wokubuye yethenjwe ngabantu ngowe-2024 - Bayede News
Isithombe; Igunundu Images
Isixazululo saboHlanga nomhlaba wabo
Inkulumo ethi isonto yisikhathi eside kakhulu kupolitiki sibe yiqiniso kubaholi namalungu e-Inkatha Freedom Party (IFP). Lokhu kulandela izinqumo ezimbili ezishayisanayo leli qembu ezilikhiphile esikhathini nje esingaphansi kwesonto.
NgoMgqibelo esiphuma kuwo esithangamini ebesilindelwe ngabovu uMengameli weqembu ekakwe ngumsunguli walo uMntwana waKwaPhindangene, uMkhulumeli weqembu uMnu uMkhuleko Hlengwa kanye noMgcinimafa uMnu uNarend Singh. Kulesi sithangami leli qembu lakhuluma into okubukeka sengathi yabe ilindelwe ngamalungu alo kanjalo nalabo abayivotela okhethweni olwedlule, lapha ubuholi bathi ngeke busebenze neqembu elibusayo i-African National Congress (ANC).
“Angikubeke kucace, ukuthi lapho sizobusa khona njengeqembu eliholayo angeke singene ekubambisaneni ne-ANC, ngenxa yokuthi abazange babe nokwethembeka kithina ngaphambilini. Benzele phansi abantu baseNingizimu Afrika nabavoti bakuveza ngokusobala ukungeneliseki nge-ANC”, kusho uHlabisa engacwayizi ngempelasonto.
Embhalweni wakhe wokubonga abavoti nowashicilelwa ngelaboHlanga emasontweni amabili edlule uHlabisa wabhala wathi: “Ngesikhathi sihamba phakathi kwenu njengabavoti, sikhuluma nani bukhoma ezindaweni eziningi ebesikwazi ukuhlangana nani kuzo, sinizwile futhi siyaqonda ukuthi yini eniyidingayo. Asizukupholisa maseko sizohlala phezu komsebenzi.
Ngeke futhi sibuye kusasa noma ngonyaka wokhetho olulandelayo sizothi siyaxolisa kasikwazanga ukwenza obekumele sinenzele khona njengoHulumeni Wendawo ngakho sicela nisinike elinye ithuba, Cha!! Ngeke sikwenze lokhu. Ithuba enisinike lona ngevoti lenu yilo leli futhi esizosebenzisa lona ukuze nangowezi-2024 nibe nesizathu ukuthi kungani kufanele nivotele iqembu i-Inkatha Yenkululeko.”
Lezi kwabe kuyizinkulumo zeqembu kanjalo nobuholi obunenhloso yokuvezela umvoti ukuthi lona kalifani neqembu elibusayo i-African National Congress (ANC). Lokhu kufakazelwa ngisho yinkulumo eyenziwa ngumholi weqembu mhla iqembu lethula isikhongeli salo eThekwini. Lapha uHlabisa waphumelela ukuveza umehluko phakathi kweqembu aliholayo ne-ANC. Wabeka i-IFP njengeqembu ongalethemba.
Ngenxa yomkhankaso omuhle i-IFP ivotelwe ngamalungu ayo kepha okumqoka ivotelwe nayilabo abangewona amalungu kodwa abahehwe yizinkulumo zabaholi bayo ebezithi ukuvotela i-Inkatha kusho izinguquko nokuqeda inkohlakalo emataniswa ne-ANC.
Ngesonto eledlule ngaphansi kwesihloko esithi: Ukukhuluma kuyajiya: Uyafufusa umbango we-Inkatha ne-IFP yaseGoli, elaboHlanga ngokukhethekile libike ngokwehlukana kwemibono kubaholi mayelana nesimemezelo sokuqala seqembu sokungasebenzisani ne-ANC. Bekukhona abathi “ukujeziswa” kwe-ANC nokungasebenzisani akube KwaZulu-Natal kuphela kungakapakeli ezindaweni ezifana neGoli. Ngakolunye uhlangothi kukhona abathi uKhongolose uyefana, useGoli noma uKwaZulu-Natal ngakho isinqumo simile.
Isinqumo sokuqala se-IFP sinike isithombe esithi leli qembu liyamukela ukuthi abavoti ‘abenzelwe phansi’ yileli qembu kabasalifuni. Ukuthi abavoti laba bayinqinde amandla ezindaweni ezimqoka nokunika ithuba amanye amaqembu afana ne-IFP ukuba aqinisekise ukuthi uKhongolose uyaqhelelana namandla okubusa. Umlayezo ubuthi ngeke kuxowe ne-ANC ngoba asikho isidingo. Kube yingenxa yalokhu abanye bemangele kwakhona ukuthi kubuye kwanezingxoxo.
Ethula isinqumo sesibili ngoLwesithathu kwabezindaba nasesizweni uHlabisa uthe: “Emveni kwezingxoxo ezinobumsulwa ne-ANC ezingeni likazwelonke, sibe nokuqonda okuvulekile bokuthi i-IFP inezihlalo eziningi yize inganqobanga gelekeqe, i-IFP izoba nguHulumeni ezingeni lomasipala. Kanjalo lapho i-ANC inezihlalo eziningi khona, inganqobanga gelekeqe, izoba nguHulumeni ezingeni lomasipala. Alikho iqembu elizothikameza lokhu, futhi sizokweseka umgomo wamaqembu amabili amakhulu eba nguHulumeni futhi eba ngamaqembu aphikisa ngokusemthethweni ngokunjalo. Ngokwesimo, lapho i-IFP ibusa khona i-ANC izoba yiqembu eliphikisayo ngokusemthethweni, kanjalo nalapho kubusa khona i-ANC i-IFP izoba yiqembu eliphikisayo ngokusemthethweni.
Lingawa licoshwe zinkukhu ngeke INkatha ibe qembulinye noKhongolose
Esitatimendeni sakhe uHlabisa akavezi ukuthi yini le esiguqukile kulokhu ababesola ngakho i-ANC. Ekhuluma nelaboHlanga uSolwazi uBheki Mngomezulu uthe kuliqiniso ukuthi noma ngabe yini eguqule i-IFP esinqumweni sayo sokuqala umphakathi ngeke uyiqonde kandukuba i-IFP yona ngokwayo ivezela izwe ukuthi yini eyenze yaba nesinqumo sesibili.
“Ngokubuka kwami i-IFP ibisivese isithathile isinqumo, into ebiyindida esinqumweni sokuqala wukuthi besihlukanisa phakathi i-ANC kukhona abathi eyaseGoli noma kwezinye izingxenye ingcono kunaleyo yaKwaZulu-Natal into eyindida nje. Okunye okusobala nokungahle kube yinkinga wukuthi isivumelwano lesi noma ngabe sithini, uma singaziwa kuyohlale njalo kunokusola ukuthi sabe singahlangene nezinsiza zomphakathi kepha kuyipolitiki nje yabaholi be-ANC ne-IFP,” kusho uDlakadla.
Nokho ubuye wathi sona lesi sinqumo sesibili sikhomba ukuthi kungenzeka siqinisekise ukusebenza kuleyo mikhandlu lapho kungekho onqobile ngesibalo esimenza akwazi ukubusa yedwana.
Ngesikhathi kuvela izindaba zokuthi kungahle kube nokuxoxa phakathi kwe-ANC ne-IFP abafundi belaboHlanga baphawulile. UMnu uBongani Myeza uthe: “Uma i-IFP ike yavuma ukusebenzisana ne-ANC kimi kuyosho ukuthi uMntwana akazwelani namalungu e-Inkatha aboshwayo, ashonayo ikakhulukazi afela eShell House. Okwesibili kuyosho ukuthi bazicabangela izisu zabo nezingane zabo abacabangeli ukukhula kweqembu, kuyobe kusho ukuthi balandela ibhodwe eliconsayo.”
UMnu uMduduzi Ngobese yena uthe: “Sekuphele konke ukukhuluma, umbuzo wami uthi kanti uMengameli uHlabisa mhla ememezela ukuthi ngeke basebenzisane ne-ANC kwakusukaphi lokho. Ubani osephinde wajikisa abaholi be-IFP esinqumweni esithathiwe, uma kugcina kusetshenziswana ne-ANC, lokho kuzobe kubabekaphi abavoti abakhombise ukungayithandi i-ANC? Okokugcina, ngabe lokho kubambisana kuzoba namthelela muni okhethweni lukazwelonke lwezi-2024?
nguMfo waKwaNomajalimane Nov 19, 2021